Maxamed Daahir Afrax: Halyay Ka Baxay Ummadda Soomaaliyeed - WardheerNews
Maxamed Daahir Afrax: Halyay Ka Baxay Ummadda Soomaaliyeed
Ugu horreyn bahda WadheerNews waxay iyagoo ka tiiraanyaysan halkan tacsi uga dirayaan, qoyskii, ehelkii, asxaabtii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, geerida naxdinta leh ee Qoraa sare Prof. Maxamed Daahir Afrax oo maanta ku geeriyooday magaalada London. Waxaan Ilaah uga baryaynaa in uu Marxuumka Jannooyinkiisa ugu deeqo, qoyskiisii iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeedna samir iyo iimaan ka siiyo.
Alle ha u naxariistee Prof. Afrax waxa uu ahaa aqoonyahan, abwaan iyo qoraa madaale ah oo ay adagtahay in uu Soomaali u soo baxo qof kaalintiisii buuxin kara.
Waxaa uu ahaa aqoonyahan wakhtigiisa iyo aqoontiisa u huray badbaadinta, tayaynta iyo horumarinta afkeenna hooyo, dhaxal muuqdana uga tagey ummaddiisa.
Waxaan mar kale leenahay Ilaah ha u naxariisto Dr. Maxamed Daahir Afrax, dhammanteenna samir iyo iimaan Alle ha innaga siiyo.